ကိုယ့်အပြစ် ကိုယ်မမြင် အပြစ်ပုံချတတ်သူများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကိုယ့်အပြစ် ကိုယ်မမြင် အပြစ်ပုံချတတ်သူများ
ကိုယ့်အပြစ် ကိုယ်မမြင် အပြစ်ပုံချတတ်သူများ
Posted by ရာမည on Jun 7, 2013 in Creative Writing | 38 comments
ရန်ကုန် မန္တလေး အမြန်လမ်းအကြောင်းကတော့အားလုံးလည်း မကြာမကြာ ကြားနေရမှာပါ ။
အမြန်လမ်း မှာကားမှောက်တယ် လူသေတယ်ဆိုရင်ပဲ ဗမာပြည်ရဲ့ အယူသည်းမှုတွေကစပြီး နေရာယူလာပါပြီ ။
အစောင့်လဲတယ်တို့၊ မြေကြမ်းတယ်တို့ဥစ္စာစောင့်လဲတယ်တို့…. စတဲ့ မမြင်ရတဲ့အရာတွေကိုတွေးကြောက်
အပြစ်ပုံချပြီး လက်တွေ့လုပ်သင့်တာတွေကို မေ့ လိုက်ကြတော့တာပါပဲ ။ ငါတို့ဘာမှားနေသလဲ လို့ မတွေပဲ
အပြစ်ပုံချတတ်တာ အကျင့်ပါနေကြပါပြီ ။
ဒီနိုင်ငံ ဒီလူမျိုးအသီးသီးမှာလည်း ပြောမကုန်တဲ့ပုံပြင်တွေက အများသားမဟုတ်လား ။ဗိုက်နာရင်လည်း …
အောက်လမ်းနဲ့လုပ်လို့… နေမကောင်းရင်လည်း ပယောဂစွဲလို့…စိတ်ဂယောင်ချောက်ခြားဖြစ်ရင်လည်း ….
ရွာသူပြုစားလို့…. စသည်ဖြင့်ပေါ့လေ …။ ပြဿနာရဲ့ အရင်းအမြစ်ကိုမရှာပဲ အပြစ်ပုံချကိုယ်လွတ်ရုန်းတာ
နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်အထိအောင် အမြစ်တွယ်နေပါပြီ ။
ယခုလည်း ကြည့်ပါ ။ အမြန်လမ်း ကားမှောက်ပြီဆိုတာနဲ့ အလွတ်ကျက်ထားတဲ့ ဒိုင်ယာလော့တွေကို မီဒီယာ
သမားများက စပြီးပြောတော့တာပဲ။ “လမ်းကြောင့်မှောက်တာ …လမ်းကနိုင်ငံတကာစံချိန်မှမမှီတာ … ” စသည်
ဖြင့် ရေးကြဖွ ကြတော့ တာပါပဲ ။
မေးပါဦးမယ် ….. ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံတကာစံချိန်မှီတဲ့လမ်း ဘယ်နှစ်လမိးများရှိပါသလဲ
ဒီ အမြန်လမ်းထက်ဆိုးတဲ့လမ်း ရော မရှိတော့ ဘူးလား ။ တစ်နိုင်ငံလုံးလမ်းတွေထက် ဘယ်လောက်များပိုဆိုး
နေပါသလဲ …. လက်ရှိသွားလာနေကြတဲ့ တောင်ပေါ် ကားလမ်းတွေနဲ့စာရင် အမြန်လမ်းကဆိုးနေပါသလား …
ဒီလို မေး ဒီလိုစဉ်းစားလိုက်ရင် သွားဖူးသူ ကားမောင်းတတ်သူတိုင်း အဖြေရှိပါတယ် ။
အများစုထည့်မပြောကြတာက ဘယ်လိုမောင်းခဲ့သလဲ …. ကားက ဘယ်လောက်ကြံ့ခိုင်ရေးကောင်းသလဲ …..
တာယာတွေရော ပွိုင့်ထူသေးရဲ့လား ….. ခရီးမသွားမှီ အောက်ပိုင်းနဲ့ အလိုင်းမင့် စစ်ခဲ့ပါသလား ….. လေ ချိန်
လေစစ် လေပေါင်ညှိတာတွေရောလုပ်ခဲ့ပါသလား …..ဒါတွေထည့်စဉ်းစားရပါမယ် ။ ပြီးရင် မောင်းသူရဲ့ 
ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ ခရီးဝေးမောင်းခြင်းအတွေ့အကြုံ ….ဒါတွေလည်းလိုပါတယ် ။ တချို့ က ….
အထက်က အချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံပေမယ့် မောင်းတဲ့အခါမှာ ယှဉ်ပြိုင်လိုစိတ်နဲ့မောင်းကြတယ်။
နေပြည်တော်ကို နှစ်နာရီခွဲနဲ့မောင်းခဲ့တယ် စသည်ဖြင့် …..သူဘယ်လောက်မောင်းနိုင်သလဲဆိုတာပြချင်တဲ့
သဘောနဲ့ မောင်းကြသလို တချို့ ကလည်း တစ်ခါမှလမ်းကောင်းကောင်း မမောင်းရလေတော့အမြန်လမ်း
ပေါ်ကိုလည်းခြေချရော လီဗာကိုမလွှတ်တမ်းနင်းတော့တာပါ ….။ဒီလို အချက်တွေလည်းရှိပါသေးတယ် ။
ကျွန်တော်လမ်းကိုကောင်လွန်းတယ် အပြစ်မရှိဘူးလို့ မပြောပါဘူး ။ယခု လမ်းအကြောင်းသတိထားမိသလောက်
ပြောပါမယ် ။လမ်းကဘကွန်ကရစ်လမ်းဖြစ်လို့မူလတာယာစားနှုံးထက်ပိုစားပါမယ် ။ တာယာပါးလျှင် သွားဖို့ 
မသင့်ပါဘူး ။တာယာပွိုင့်တွေဟာ ၂၅% လောက်ပဲရှိရင် ကီလို၁၀၀ နှုံးနဲ့မောင်းလျှင် တာယာပွင့်ပြီး တိမ်းမှောက်
နိုင်ပါတယ် ။ ပြီးတော့လူတော်တော်များများ သတိမထားမိတာက.. ကားတွေရဲ့ ရှော့ ဘားတွေပါ ။ အဲ့ ရှော့ဘား
တွေ မကောင်းရင်လည်းဘအရှိန်နဲ့ဆွဲကွေ့ရင် တိမ်းမှောက်နိုင်ပါတယ် ။ ယခု ပြုပြင်နေပြီဖြစ်ပေမယ့် ယခင်က
လမ်းအမှတ်သားတွေရှင်းအောင်ပြမထားပါဘူး ။ ပြီးတော့တချို့ ကွေ့တွေမှာ ဒီဂရီအနည်းငယ်မစောင်းပေးထား
တဲ့အတွက် ပက်လက်ကွေ့ဖြစ်နေပါတယ်။ အရှိန်နဲ့ကွေ့လိုဘ့မကောင်းပါဘူး ။ယခု အလယ်ကျွန်းအုတ်ဘောင်ကို
ဆေးသုပ်နေပြီဖြစ်ပေမယ့် ယခင်က ထင်ရှားအောင်မပြထားလို့ညာမောင်းသမားတွေအနေနဲ့ အချိန်အဆလွဲပြီး
ပွတ်တိုက်မိတတ်ပါတယ် ။ ကျောက်ဆည်နားမှာ မှောက်ခဲ့တဲ့ တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့အဖြစ်အပျက်က အဲ့လိုပါပဲ ။
တံတားအဝင်တွေမှာ ရုတ်တရက် ကျဉ်းသွားတာလည်း အမြင်မှားစေနိုင်ပါတယ် ။
ကျန်တာတွေကတော့အခြားလမ်းတွေက ပိုဆိုးပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့အတွေးအမြင်ပြောင်းပြီး လုပ်ဆောင်
ရမှာက ကိုယ့်အပြစ်ကိုယ်မြင်ပါ ။မမြင်ရတာတွေ ယုံတမ်းစကားတွေကို တွေးမကြောက်ပါနဲ့
ကားမထွက်ခင်နတ်ပြ နတ်တင်နေမယ့်အစား ကိုယ့်ကား ကိုစစ်ပါ ။ လမ်းတလျောက် တောပိုင် တောင်ပိုင်
ဘိုးဘိုးကြီးတွေကို တ နေမယ့်အစား စည်းကမ်းတကျ ဂရုစိုက်မောင်းပါ ။ ကိုယ်မောင်းနေတာ ဘာကားလဲ
ဘယ်လမ်းကိုမောင်းနေတာလည်းဘမမေ့ပါနဲ့ ။ဒီထက်စုတ်တဲ့ ကားတွေနဲ့ ဒီ့ ထက်ဆိုးတဲ့လမ်းတွေကို သွားခဲ့ဖူး
ပါတယ် ။ ဇီးသီးသည်မဗျိုင်းလို ဘဝမမေ့ ပါနဲ့ ။ နောက်ဆုံးပြောချင်တာက ..
အစောင့်လဲတာလည်းမဟုတ်ဘူး ။ တောပိုင်တောင်ပိုင် ကိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး
ကိုယ် အသုံးမကျလို့ ဖြစ်တာ ။
အမြန်လမ်းလို့ ပြောတဲ့ သူတွေ စကား နားထောင်ပြီး ယုံစားပြီး အမြန်မောင်းလို့ ဖြစ်ကြတာ တဲ့။
နောက်ခါ သူတို့ ပြောတာ မယုံကြနဲ့။
နိုင်ငံတကာ ထလန်စပွတ်တေးရှင်း အင်ဂျင်နီးရားရင်း စံ နဲ့ စစ်ကြည့်ရင်ကို မှားနေတဲ့ ကွေ့တွေ အန်ဂယ်တွေ များဂျီးပဲတဲ့။
အစ်မကြီးလည်းသိမှာပါ ။ ဗမာပြည်လမ်းတွေနဲ့ ယဉ်မောင်းတွေရဲ့ စည်းပျက်ကမ်းပျက်လုပ်တတ်တာ
ဘယ်လောက်စံချိန်မမှီသည်ဖြစ်စေတစါနာရီ ကီလို ၁၁၀ နှုံးတော့ အေးရာအေးကြောင်းမောင်းလို့ ရပါတယ် ။
ကားသမားစည်းကမ်းရှိတယ်လေ ။ ကွေ့ ရောက်ရင်အရှီန်လျော့တဲ့
အုမောင်းနေတဲ့ကောင်တွေက ကွေ့တွေကို ကီလို ၁၂၀ နီးပါးနဲ့ကွေ့ကြတာခင်ဗျ ။
ကီလို ၈၀ နဲ့ကွေ့မရတဲ့ကွေ့ မရှိပါဘူးခင်ဗျာ ။
ကိုင်လွှတ်ထလိုက်တာပါ လို ဟိုကန္နားစီးကတော့
၆ ခုနှစ်လုံးကိုတော့ ၄ စားသွားပါပြီ
ကျွန်တော်လည်း ၆ မြင်ကပ်လာလို့ ပါ
ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်တစ်ခုကတော့ အာမခံလုပ်ငန်းတွေ များများ လုပ်တော့မယ် ဖတ်လိုက်ရတယ် … :harr:
တလောကတင်… အဲဒီလမ်းအကြောင်း.. မြို့ပြပါမောက္ခဟောင်းဦးမင်းဝဏ်နဲ့.. အခုလက်ရှိမြို့ပြပါမောက္ခတို့အယ်လ်အေမှာတွေ့တုံးပြောဖြစ်ကြတာ.. နားထောင်ဖြစ်တယ်..။
လမ်းကိုက.. ဆိုးတာတဲ့ဗျ…။ ဆောက်တုံးကလည်း.. ပေါက်တတ်ကရလုပ်သွားတာဆိုပဲ..။
ယူအက်စ်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်၆၀လောက်က အင်ဖရာစရပ်ချာအဖြစ်… ဖရီးဝေးတွေစဆောက်တော့.. နည်းပညာအကူအညီကို.. ဂျာမန်ကနေအများကြီးခေါ်သုံးကြရတာပါ…
ဂျာမန်တွေက.. (အဲဒီတုံးက) ပရိုပေါ့..
ကြုံတုံးဗဟုသုတလေးပြောရရင်.. အဲဒီလမ်းတွေဆောက်တော့..လိုတဲ့လုပ်အားတွေအတွက်.. မက်ဟီကိုကနေလူတွေသွင်းတာတဲ့..
ဗီဇာပေးပြီးလမ်းဖောက်၃နှစ်လား..၅နှစ်လားမသိ.. ပြည့်ရင်.. အစိမ်းကဒ်ထုတ်ပေးခဲ့တာတဲ့..
( မြန်မာတွေ အတုယူသင့်တာပေါ့) :harr:
မြန်မာဖရီးဝေး.. ဟိုင်းဝေးတွေကို.. ယူအက်စ်အကူအညီနဲ့ဆောက်သင့်တာပေါ့…။
သိသလောက်.. ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်လမ်းတွေကို…ဆောက်သွား/ဆောက်နေတဲ့အထဲ.. အာအိုင်တီဆင်းတွေအပါအ၀င်.. မြန်မာအင်ဂျင်နီယာတွေအများကြီးပါလို့ပါ…။
.. ကားဘီးသေသေချာချာစစ်ပါ..။ ကွန်ပေါင်းတာယာမှာ ပြောင်သလောက်ဖြစ်နေရင်မမောင်းပါနဲ့..
.. အကွေ့တွေသတိထားပါ..။ ဖြစ်နိုင်ရင် မိုင်၂၅လောက်နဲ့ကွေ့ပါ..။ အကွေ့မှာ ဘရိတ်နဲ့နင်းမကွေ့ပါနဲ့..။
.. ထိုင်ခုံခါးပါတ်ပါတ်ကြပါ.. ပေါ့..။
ကျုပ်မြန်မာပြည်လာဖြစ်ရင်.. အဲဒီကိုင်ကိုင်နေတဲ့နတ်.. နားရင်းကိုင်ပေးမယ်..
ဘယ့်နှယ်.. လူအသက်တွေ သတ်နေရတယ်လို့..။
အဲ့လမ်းစဖေါက်ဖို့ တောရှင်းခဲ့တာ ၁၉၇၀ ကျော်များလောက်ဆီကထင်ပါတယ် ။
မူလကတော့တတ်နိုင်သမျှဖြောင့် အောင်ဖေါက်ပြီး စံချိန်မှီလုပ်ချင်ပုံပါပဲ
စစ်အစိုးရခေတ်ရောက်တော့နေပြည်တော်စီမံကိန်းကိုအထောက်အကူပြုဖို့အမြန်ဖေါက်ခဲ့တဲ့
အမြန်လမ်းဖြစ်သွားတာ ။ ကွန်ကရစ်ကို ဖျော်ပြီး လမ်းရိုးပေါ်လောင်းချ ။ခြောက်ရင် လမ်းဖြစ်ဆိုသလို အမြန်အလွယ်လုပ်ခဲ့တာပါ ။
တံတားအဝင်းတွေမှာလည်း လမ်းကလိမ်နေပါတယ် ။ အများစုက တာယာပွင့် ပြီး
မှောက်ကြတာ ပါ ။ တချို့ က မိုင်နှုံးလွန်မောင်းကြပါတယ်။ ၁၅၀ ကီလိုနှုံးလောက်မောင်းရင် သေချာပါတယ် အနှေးနဲ့အမြန်ပါပဲ။
ဘာမှ ပြင်ဆင်လို့ မဖြစ်နိုင်သေးရင် ဖြစ်နုင်သလောက်အကောင်းဆုံးလုပ်ရမှာမဟုတ်လား
ပြန်ပြင်မယ်ဆို အစအဆုံးလုပ်ရမှာထင်တယ် ။ ရန်ကုန်ကနေ တောင်ငူကြားအထိ လမ်းမှာပြဿနာများတယ် ။
တစ်ခုရှိသေးတာက ကွန်ကရစ်ဖြစ်လို့ညဘက်ဆို မီးရောင်အောက်မှာ
ဖြူဖွေးပြီးအမြင်မှားလမ်းပျောက်တတ်တယ် ။အခုတော့ တချို့ နေရာတွေမှာ ကတ္တရာ ခင်းနေပါပြီ
ယူအက်စ်ဖရီးဝေးတွေအားလုံးလိုလိုက.. ကွန်ခရစ်သားကြီးပါပဲ..။ အဖြူတွေပေါ့..။ လမ်းကြမ်းအောင်.. အစင်းအရစ်တွေဖေါ်ထားသေး…။
လမ်းကြောကို. ရောင်ပြန်မီးတုံးလေးတွေပြထားသမို့.. ထင်းနေတာပါ..။
အဲဒါကို.. တနာရီ၁၀၀လောက်.. ကားမောင်းထိုင်ခုံကို.. နောက်တအားလှန်ချပြီးမှ.. အိပ်နေတဲ့ပုံစံနဲ့သက်သက်သာသာမောင်းတာပါ..။
ဂျီပီအက်စ်မှာ လမ်းအဖြောင့်အကောက်ကိုကြိုကြည့်လို့ရတာမို့.. လမ်းဖြောင့်ရင်.. ခရူ(အော်တိုပိုင်းလော့)နဲ့.. ချတာပဲ..။
အဲဒီလိုနဲ့မှ.. မိုင်တထောင်ကိုတောက်လျှောက်မောင်းလို့ရမှာပေါ့..။ ဗဟုသုတပြောပြတာပါ..။
မြန်မာပြည်ရဲ့ ကားအဓိကပြသနာတခုက.. ယဉ်မောင်းထိုင်ခုံက.. ကားလမ်းဘယ်ညာနဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတာရယ်.. ကားတွေကစုတ်တာရယ်ပါ…။
သာမန်အားဖြင့်.. သက်တန်းငါးနှစ်(သို့)ကီလို၁သိန်းမောင်းပြီးကားကို ဂျပန်လူမျိုးတွေပယ်ပါတယ်..။ အစုတ်စာရင်းသွင်းပါတယ်..။ အဲဒါတွေမြန်မာပြည်မှာ.. တနာရီကီလိုရာဂဏန်းဖွင့်မောင်းရင်တော့.. သေချာသွားသပေါ့..
မြန်မာတွေ.. အိန္ဒိယကကားပဲဖြစ်ဖြစ်..ချိုင်းနားကားဖြစ်ဖြစ်.. အသစ်ကို.. အာမခံ(၀ရန်တီ)နဲ့.. ၀ယ်စီးသင့်ပါတယ်..
အိန္ဒယတော့ မသိ ဘူးဗျ ။ချိုင်းနားကတော့ တော်တော်စုတ်ပဲ့တာတွေသွင်းပေးတာပါ ။
ရှော့ ဘားအထိုင်ကို ဖိုက်ဘာတစ်မျိုးနဲ့လုပ်ထားတာ
ဒီကလမ်းနဲ့ဆိုတော့ ကျွံတာပေါ့ဗျာ ။
ဂျပန်ကျ ကီလိုတစ်သိန်းကျော်ကားကဒီမှာအသစ်လိုလုပ်စီးရတာ ။နှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်ကားတွေတောင်မှ သဌေးစီးအဖြစ်ရှိခဲ့သေးတာပဲ ။
ကျွန်တော်အထက်မှာပြောခဲ့တာလဲ အဲ့ဒါပါ ပဲ …ကိုယ်မောင်းတဲ့ကားကိုဘာကားဆိုတာသိဖို့သက်တန်းဘယ်လောက်ကြာပြီဆိုသိဖို့ လေ ။
ဦးခိုင်မောင်းသလို မိုင်၁၀၀ နှုံးနဲ့လည်း မောင်းတဲ့သူရှိတာပေါ့ဗျာ ။
သွားတာပေါ့ ဘယ်နေလိမ့်မလဲ ။ဟိုတစ်နေ့ က ကျွန်တော်မောင်းနေတာ ကီလို ၁၀၀ လောက်ရှိမယ် ကျွန်တော့ ကို ကျော်တက်သွားတာ ရိပ်ကနဲဘဲ ။ ခန့် မှန်းသာကြည့်ပေတော့ ဦးခိုင်ရေ …
” လမ်းဖြောင့်ရင်.. ခရူ ( အော်တို ပိုင်းလော့ ) နဲ့.. ချတာပဲ ”
သူကြီး ပြောလိုတဲ့ ခရူ ( Cruise Control ) ဆိုတာ ၊
Speed လောက်ကိုပဲ အသေ လုပ်ပေးနိုင်တာ မဟုတ်လား ။
ကျနော်တို့ Transportation ( ရေကြောင်း ၊ လေကြောင်း ) လောကမှာတော့ ၊
အော်တို ပိုင်းလော့ ( Auto Pilot ) ဆိုတာ ၊ ယာဉ်ကို ဘယ်ညာ ကွေ့ပေး ၊
အနိမ်အမြင့် ပြောင်းပေး ၊ Speed အတင်အချပါ လုပ်ပေး နိုင်တဲ့ စံနစ်ကိုမှ ခေါ်လေ့ ရှိပါတယ် ။
အော်တိုပိုင်းလော့ဆိုပြီး.. လက်ပါလွတ်လိုက်မှ.. ကွိကုန်မှာစိုးလို့..။
ရန်ကုန် – ပြည်လမ်းကို အမေရိကန်ကုမ္ပဏီ “လူဝီဘာဂျာ”က ခင်းသွားတာပါ…
အကွေ့အချိုးတွေမှာ အန်ဂယ်မြှင့်ထားတာမို့ ဖောက်ပြီးစက အတော်မောင်းကောင်းပါတယ်…
တံတားနေရာတွေမှာ ရုတ်တရက်ကျဉ်းသွားတာမို့၊ အထာမသိရင် သေပြီဆရာပဲ…
အဲဒါကို ယာဉ်မောင်းတွေက စွတ်ရမ်းမောင်းနေတာ ဖြစ်တော့မှ “နတ်” လွှဲမချနဲ့လေ…
လမ်းက ကျွန်တော်တို့ အခေါ်ပက်လက်ဖြစ်နေတာပေါ့ 
ကွေ့မှာ ပက်လက်ကြီးဆွဲရတော့အရှိန်လွန်ပြီး လေဟုန်စီးကြတာလေ
ဒါကို သရဲပူးသလေး အစောင့်လဲသလေးပြောတတ်ကြတော့ ခက်တာဘဲဗျာ
ယခုပြည်လမ်းလည်း မြန်မာပြည်မှာပြုပြင်သည် ဖြစ်သွားတော့မကောင်းလှတော့ ပါဘူး
မိုးတွင်းမှာဆိုရင် ကားတွေစကိတ်စီးတာ ခဏခဏ ပဲ ။
နင်လည်းလွန်တယ် နင်လည်းနင်ဘဲ ဆိုသလို
စစ်ဗိုလ်ဆိုတဲ့သတ္တဝါက မဆလာတောင်ဖျော်မတတ်ဘဲနဲ့ အင်ဂျင်နီယာကို ဟိုလိုလုပ်ဒီလိုလုပ်ဆိုပြီး
ဘယ်ဘိုဂျီးဂ ဘယ်လမ်းတံတားတည်ဆောက်မှု့ကိုသွားရောက်စစ်ဆေးညွှန်ကြား ဆိုလားဘါလား
ဟိုက ကိုင်လိုက်မှ ယားကျိယားကျိဖြစ်နေမယ်ဘာမှတ်သဒုံး
သတိပေးဆောင်းပါးလေးရေးတာ ကောင်းပါလေ့ ကိုရာမညရေ့
လူတွေက သတိထားဆင်ခြင်ကြရင် ထိခိုက်မှု့နဲတာပေါ့ဗျာ…
လမ်းကို ကျွန်တော်တို့ မှပြင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘဲလေ
ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပြင်မောင်းဖို့ ဘဲမဟုတ်လားဗျာ
သတ်မှတ် မိုင်နှန်း တစ်နာရီ ကီလို(၁၀၀) နှန်းသာမောင်း ၊မကျော်စေနဲ့ ၊ဘီးပွင့်သွားတာတောင်. လူတွေ ဘာမှမဖြစ်ဘူး၊ ကိုယ်တွေ့
တစ်ချို့ က ရမ်းကားပြီးဖြစ်ကြတာပါ
သို့ သော်လည်း ကီလို၁၀၀ လည်းရှေ့ ဘီးရုတ်တရက်ပွင့်ရင် ထိန်းလို့ မလွယ်
အဖွား တို့ အမေ လက်ထက် ကအထိ နတ်အုန်းသီး တွေ ဘာတွေ လုပ်သေးတယ်။
အဖွား တို့ အမေ ကဘဲ အဲဒါတွေ ကို ဖြုတ်ပေးခဲ့တာ။
ဒီတော့ ရှေးရိုး မယူသင့်တာတွေ ကို ဖြုတ်ပေးခဲ့တဲ့ အဖွား အမေ ကို တကယ်ဘဲ လေးစားမိတာ။
လူတော်တော်များများ မှာတော့ ဒီ အယူ မရှိပေမဲ့ တစ်ချို့ အခုထိ နတ်စင်ထားတုန်း။
ဒါပေမဲ့ တစ်ချို့ သူ့ စိတ်လုံခြုံရာရှာသမို့ အများကို မထိခိုက် ရင်တော့ မကဲ့ရဲ့သင့်ဘူး ထင်ပါတယ်။
ဘုရားသခင် ယုံတဲ့ ခရစ်ယာန်တွေ ကတော့ သူတို့ ဘုရား ကလွဲ ကျန်တဲ့ နတ်ဘုရား တွေ ကို အယုံအကြည် မရှိတဲ့။
အဲဒါကို က အေးသီးရစ်စ် ( Non-believer ) တွေ အတွက် ဟာသဖြစ်နေတာ။
နောက်ပြီး ကားတွေ မှာ ခရီးဝေးသွားရင် အချိန်မမေးရတဲ့။
တစ်ခါ နယ် ကို ကားကြီးငှားပြီး အပျော်သွားတာ ကလေးတွေလဲ ပါတော့ အချိန် မေးကြသပေါ့။
လူကြီးတွေ က မမေး နဲ့တားလဲ မေးတာဘဲ။ ရောက်ချင်တာကိုး။
ကားသမား တွေ မှာ မျက်နှာပျက်လို့။
နောက်တော့ ရောက်ခါနီး ကားဘီးပေါက်တာဘဲ။
ပေါက်မှာပေါ့။ ဒီလောက် ခရီးရှည် သွားမှာ ကို ကားဘီး အစုတ်ကို ပေါက်လိုက် ဖာလိုက် လှည့်သုံးလို့ ကတော့ အချိန်မမေး လဲ ပေါက်မှာဘဲ။
လမ်းတွေ ကလဲ ချိုင့် တွေ ကင်းမှ မကင်းတာ။
ဒီလို သတင်းအရေးလေးအတွက် ကျေးဇူးပါ ရာမညရေ။
ပထမဆုံးပြောချင်တာက တပါးသူ၏ယုံကြည်မှုအပေါ်ကဲ့ရဲ့သလိုဖြစ်ရင် တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာ
မကြာမကြာတွေ့နေရတာကတော့အဲ့ယုံကြည်မှုတွေပေါ်အားကိုးပြီး ပုံအပ်ထားတာတွေတွေ့ရလို့ 
ဖြစ်သင့်တာလေးပြောတာပါ ။ဒေါသသံနဲနဲပါသွားတာခွင့်လွှတ်ကြပါခင်ဗျာ ။
အယူသည်းမှုတွေက ကိုးကွယ်မှုဘာသာထက်ပိုနေတာလေးတွေလည်း နေရာတိုင်းအသက်အရွယ်အလတ်တန်းလောက်အထိ
ရှိနေပါသေးတယ် ။။ နောက်မှ သီးသန့် ပြောပါမယ် ။ ယခုလိုလာရောက်အားဖြည့်ကူညီမှတ်ချက်ပေးတာကျေးဇူးပါခင်ဗျာ
အမြန်လမ်းမရှိလို့ နဂိုလမ်းဟောင်းတစ်ခုတည်းသာရှိရင်လည်း အခုလိုကားပေါလာပုံမျိုးနဲ့ ဆိုင်ကယ်သမားဆရာတွေ..စက်ဘီးသမားတွေ ရက်တောင်ခြားမှာမဟုတ်ဘူး… လမ်းဟောင်းမှာ ဆိုင်ကယ်တွေလမ်းမပေါ်စွတ်တက်လာတာရှောင်ရတာစိတ်ပင်ပန်းဖို့အကောင်းဆုံးပဲ..
အမြန်လမ်းက အခေါက်ပေါင်းများစွာသွားဖူးပါတယ်.. ကားတွေကလမ်းရှင်းတယ်ဆိုပြီးစွတ်မောင်းကြတယ်.. တံခါးတွေပိတ်အဲကွန်းဖွင့်မောင်းတော့ ၁၂၀၊ ၁၃၀ လောက်ထိက ကားထဲမှာတော့ငြိမ်နေတာပဲ…. အဲဒီအရှိန်လောက်နဲ့က တကယ်တမ်းနည်းနည်းဆိုထိန်းလို့မှမလွယ်တာ.. ခါးပတ်လည်းပတ်လေ့ မရှိတော့ပိုဆိုးတာပေါ့.. နောက်ဟိုကရောက်လာတဲ့ကားသစ်တွေ ကြံ့ခိုင်မှုကိုမစစ်ဆေးဘဲ.. ကားကြီးဝယ်ပြီးခရီးထွက်လိုက်မဟဆိုတော့.. နေပူမှာ ကွန်ဂရစ်လမ်းနဲ့တာယာဆွေးထိ..ဂျိမ်းဘွန်းအရှိန်နဲ့ဆိုတော့ကွိတာပေါ့.. ကိုယ်၁၀၀လောက်မောင်းနေတာကိုတောင် ကျော်တက်သွားကြတာ ခဏဆိုရိပ်ခနဲ မမြင်ရတော့ဘူး.. တချို့ကိုယ့်ကိုကျော်သွားတာ ကားဘေးဘီလေးတွေ..
အဲဒီလမ်းမှာဆိုးတာက ခွေးတွေ..နွားတွေလည်းဖြတ်တာတွေ့တယ်.. နွားဆိုအုပ်လိုက် ဟိုဘက်ဒီဖက်မောင်းကူးတာမြင်ဖူးတယ်.. ပိုဆိုးတာဆိုင်ကယ်သမားတွေ..တချို့ဆိုလမ်းပြောင်းပြန်တောင် စီးလိုက်သေးတယ်…. အဲဒါတွေကို ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူသင့်တယ်..
နောက်ဆုံးတော့အဲဒီလမ်းကို အခုထက်ကြမ်းပေးလိုက်ရင် မတော်တဆမှုနည်းသွားမလားပဲ..
အစ်မပြောတာအမှန်ပါ။လမ်းဟောင်းမှာသွားမောင်းရင် ပျမ်းမျှကီလို ၈၀ နှုံးမလွယ်ပါဘူးခင်ဗျာ ။
လမ်းကပိုမိုကွေ့ကောက်ပြီး ရွာဝင်ရွာထွက် မြို့ ဝင်မြို့ ထွက်များတော့အစ်မပြောသလိုမျက်စိရှုပ်စရာများပါတယ် ။
လမ်းဟောင်းမှာလည်း မတော်တဆမှုတွေဖြစ်တာပါပဲ ။
လူရဲ့ ဆင်ချင်နိုင်မှုသာအဓိက လို့ ပြောချင်ပါတယ်ဗျာ
2015 နောက်ပိုင်းကျရင် ဇွတ်လုပ်ထားတဲ့ နေပြည်တော်ကြီးနဲ့ ဇွတ်ခင်းထားတဲ့ အမြန်လမ်းကြီးတွေကို အသုံးမပြုတော့ပဲ နေခွင့်များရလာမလားလို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
၁၉၉၂ လောက်မှာ ပဲခိုးရိုးမအရှေ့ ခြမ်း ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းကို ၆ လမ်းသွားလုပ်ဖို့ စီမံကိန်းဆွဲခဲ့ပါသေးတယ် ။ သို့ သော်လည်းမဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့လေ ။
အမြန်လုပ်ခဲ့တဲ့မြို့ တော်ကြီးက ထူးပြီး အသုံးမတည့် လှပေမယ့် 
ဇွတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ နေပြည်တော်လမ်းက သုံးတတ်ရင် အဆင်ပြေပါသေးတယ် ။
နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ထဲက လမ်းတွေလိုသဘောထားပြီးမောင်းရင်တော့ဖြစ်နေဦးမှာပါခင်ဗျာ
တသတ်မတ်အလျှင် နဲ့  ကီလို ၁၀၀နှုံးမောင်းလို့ ရင်
မြန်မာပြည်အနေနဲ့ ခရီးပေါက်ပါတယ် ။
လမ်းမကောင်း ကားမကောင်း လည်းအဓိက ကမောင်းတဲ့လူပဲလေ
လမ်းကမကောင်းတာ မကောင်းတာ အကွေ့ဆို ၈၀ ၁၀၀ ဆွဲကွေ့လို့ရပါတယ်
၁၀၀ ၁၂၀ ဆိုတော်ရောပေါ့
အန်းကယ်ကြီးလည်းတွေ့မှာပါ အမြန်လမ်းပေါ်ရောက်ရင် ပြိုင်ကားချန်ပလုံတွေဖြစ်ကုန်တာလေ ။
တချို့ ကျတော့ လည်း မိုက်ရူးရဲပေါ့ဗျာ
အန်ကယ်ကြီးပြောသလို တာယာပူမပူ စစ်တာတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲခင်ဗျ
ဖြစ်တော့ မှ လမ်းကို ဆဲမှာလေ ။အပေါ်ကအစ်မခရစ်စတယ်လိုင်းပြောသလို ဂျပန်တာယာအဆွေးတွေနဲ့မောင်းရင်းပွင့်တာလည်းရှိသေးတာပေါ့
ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာ အညံ့စားသုံးရတာများတော့ဂျပန်အော်ရီဂျင်နယ် ဆိုပြီးတန်ဖိုးထားကြတာလေ ။
အားဖြည့် မှတ်ချက်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ။
ဒါပေမယ့် သတိလေးနဲ့မောင်းရင် နေ့ပိုင်း ကောင်းကောင်းမောင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်
ကျုပ်က ကီလို ၁၂၀ လောက်နဲ့ မောင်းဘူးပါတယ်။ အေးဆေးပါ။
အကွေ့အများစုက ကီလို ၉၀-အောက်ဆိုရင် ငြိမ်ပါတယ်။
ကီလို၁၀၀ နဲ့ကွေ့ရင် တချို့အကွေ့တွေမှာ နဲနဲဆွဲတယ်..။
လမ်းအမှတ်အသားတွေ မရှိလို့ လမ်းကိုကြည့်ပြီးတော့မောင်းဖို့လိုပါတယ်။
လမ်းဘယ်အစွန်အမြန်ကြောက ကျဉ်းလဲကျဉ်း လမ်းလည်တုံးတွေကလဲ အနီကျားမလုပ်ထား
အဆိုးဆုံးက လမ်းကြောမျဉ်းကို လမ်းလယ်တုံးနဲ့ ၂ ပေလောက်ခွာမထားပဲ ၁ ပေ ထက်လျော့ပြီး
ခွာထားတော့ ညာမောင်းကားတွေ ခေါင်းချိန်ရတာ နဲနဲခက်ပြီး လမ်းလယ်တုံးနဲ့ပွတ်မိ+လမ်းဘေးထိုးကျ မှောက်ဖို့များပါတယ်။
အဲဒီတော့ အဲဒီလမ်းကြောက မမောင်းနဲ့ပေါ့
ကျုပ်ဆို စက်ဘီးနဲ့လူအုပ်ကို ရှောင်တဲ့တချိန်ကလွဲပြီး ဘယ်စွန်ကြောက လုံးဝမမောင်းဘူး..။
(အမြန်လမ်းမှာ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီး၊ လူ၊ ခွေး ၊ နွား နဲ့ အခြားမမျှော်လင့်နိုင်တာတွေကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဒီနိုင်ငံဟာ မမျှော်လင့်နိုင်တာတွေကို မျှော်လင့်ထားရမယ့်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ အမြန်လမ်းလေးပေါ်ရောက်တာနဲ့ ဘ၀မေ့မသွားဖို့လိုပါတယ်။)
ကျွန်တော် မိုးမကျခင်က ပြန်လာတုန်းက ညနေဖက်လမ်းမပေါ်မှာ
အဓိက ကတော့လမ်းဆိုးတွေမှာ ကားစုတ်တွေနဲ့မောင်းခဲ့ဘူးတာ မမေ့ ကြဖို့ ပါခင်ဗျာ
ရဲကိုကိုရေ ၊ ဒီပို့ စ် ထဲ ရေးထားတာ ကို သဘောတူ ကြိုက် နှစ်သက်တယ်ဗျာ
ဒီလ ၁၆ ရက်နေ့ ဆိုရင် ၊ ကျောက်စိမ်းသမားတွေ ပျော်မြူးရာ ပွဲတော်ကြီး နေပြည်တော်မှ စတော့မယ် ။
ကားအကောင်းစား ( သည်နိုင်ငံက လူတွေ အတွက်တော့ အကောင်းစားပေါ့ဗျာ ၊ သိန်း ရာကျော် ဆိုတဲ့ ပမာဏ က နဲတယ်မှ မဟုတ်တာ ) ကြီးတွေ ကို အသွားအပြန် ကိုယ်တိုင်မောင်းသွားကြတာပေါ့ ။
တစ်ခုရှိတာက တစ်လမ်းလုံး သောက်စားပြီး မောင်းကြတာ ဆိုတော့
အက်စီးဒန့် ဖြစ်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်းက ၇၀% ကျော်နေတာပေါ့နော ။
တစ်လမ်းမောင်း အရှောင်အတိမ်းမရှိတော့ စိတ်ပေါ့ပြီးဂရုစိုက်နဲကြတာလည်းပါတယ်ဗျာ။
မဖြစ်တာတော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ ။ဖွင့်ကာစထက်စာရင် ဒီဘက်နောက်ပိုင်း
အက်စိဒန့် အဖြစ်နဲသွားပါတယ် ။ သဘောပေါက်သွားကြလို့ ထင်ပါတယ် ။
အမြန်လမ်း မှာ အရင်တုန်းက ကားမောင်းပြီဆိုတာနဲ့ မကြာဘူး အိပ်ငိုက်လာတယ်.. လမ်း က လည်း ပုံစံ တထပ်တည်း ဖြစ်နေတယ်.. မျက်စိထောင့် က သစ်ပင်လေးတွေ ရိပ်ကနဲ ရိပ်ကနဲ ဖြစ်တော့ အိပ်ချင်လာတယ် ထင်တာပဲ။
အခုနောက်ပိုင်း သွားရင် မအိပ်ငိုက်တော့ဘူး သတိထားမိတယ်။ ဆိုင်းဘုတ်တွေ မျက်စိ ကစားသွားလို့.. ထင်တာပဲ..
အရင်ကထက် အများကြီး ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ထားပါတယ်။
မြေစမ်းခရမ်းပျိုးနေတာ ဆိုတော့.. နောက်တော့ ဒီထက် အဆင်ပြေတာတွေ ဖြစ်လာမယ် ထင်ပါတယ်။
အခုတောင် ယခင် စစချင်း ထက် အများကြီး သိသိသာသာ ပြောင်းလဲလာတယ်.. ဆေးသုတ်တာ မှန်အ၀ိုင်းတွေ တပ်ထားတာတွေ ညဘက် ဆိုလည်း မီးတိုင်တွေ ဘာတွေ.. တခုပဲ.. အနှေးယာဉ်တွေ ခိုးပြီး တက်မောင်းတာတွေ တွေ့တယ်။ ဒါတောင် သံဇကာတွေ အရှည်ကြီး ပိတ်ထားရတာကို.. ဘယ်လို တက်လဲ မသိပါဘူး။ ကား ကတော့ ပုံမှန် နှုန်းနဲ့ မောင်းတယ်။ အလယ်ကြောက မောင်းတာ များတယ်။ ဘယ်ကလာလာ ညာကလာလာ ရှောင်ဖို့ အချိန်ရအောင်.. နောက်ပြီးတော့ အနောက်ကျ ကျော်ချင်တဲ့ ကား အတွက် လမ်းချန်ပြီးသား ဖြစ်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
အလယ်ကျွန်းဘောင်ကိုမြင်ရဖိုဘ့ဆေးသုပ်တာတွေ ကွေ့တွေမှာ ဖြူနီကြားတိုင်စိုက်ပေးတာတွေ နဲ ညဘက်လမ်းမပျောက်ဖို့ရောင်ပြန်တုံးလေးတွေလည်း တပ်ပေးထားပါတယ် ။
ဂရုလေးနဲနဲစိုက် အိပ်မငိုက်ရင် အဆင်ပြေပါတယ် ။
သုံး လိုင်းရှိတဲ့လမ်းမှာ အလယ်လမ်းကမောင်းတာ ကောင်းပါတယ်
အမြန်လမ်းလို နှစ်လိုင်ထဲရှိရင် လက်ယာကပ်မောင်းတာပိုကောင်းပါတယ်
လက်ဝဲကပ်မောင်းရင် မတော်တဆ အချိန်အဆလွဲရင် လမ်းလယ်ကျွန်းကိုတိုက်ပြီး
ကွက်လပ်ထဲရောက်ပြီးလန့် နိုးမှာပါ ။
အိပ်ချင်ရင်ကားရပ်ပြီး ခဏနား မျက်နှာသစ်ပြီးမှမောင်းတာပိုအန္တရယ်ကင်းပါတယ်
ဟိုးးး အပေါ်မှာ ဦးခိုင်ပြောသွားသလို ပက်လက်လှန်လုနီးပါးနဲ့ကားမောင်းရင်တော့ 
ကျွန်တော်ဆို အိပ်ပျော်သွားမှာပါ ။
ကားက အမြန်လမ်းမှာ အမြန်မောင်းးတာ
ဘေး ဘယ်ညာ ကို ကားက ခါယမ်းနေလွန်းလို့ ..
ဘယ်နေရာမှာများ… တစ်ဖက်ဖက်ကို တိမ်းစောင်းပြီး.တုံးလုံးလဲကျသွားမလဲ.လို့တွေးနေမိတာ .။
ကုသိုလ်တော့ ရပါတယ်လေ ။
မြန်မာပီပီ…ကြောက်တတ်တဲ့ကိုယ့် ကို ပဲ..ကိုယ် အပြစ်မြင်မိတယ် ။
နောက်တာပါ ။အဲ့လိုမောင်းရင် တချိူ့ ဂိတ်တွေမှာတိုင်လို့ ရတယ်
အကန့်အသတ်ဘောင်နဲ့စည်းနဲ့ လုပ်သင့်တာ ထောက်ခံပါတယ်